Brandalism: 82 fanaaniin ayaa ku mudaaharaaday Paris kahor COP21 | Abuurista khadka tooska ah
Brandalism: 82 fanaaniin ah ayaa 600 oo boorar xayeysiis 'been abuur ah' u qaadaya waddooyinka Paris si ay uga mudaaharaadaan COP21
Maalmo uun ka hor bilowga Shirka COP21 ee Cimilada Cimilada oo lagu qabto magaalada Paris maalmahan iyo wixii ka dambeeyay weeraradii argagixiso ee dhacay horraantii Noofambar, 600 boodhadh ayaa la qaybiyey iyada oo loo marayo waddooyinka Paris iyada oo calaamad u ah mudaaharaad.
Boorarka ayaa la dhajiyay muraayadda gadaasheeda kuwaas oo daboolaya xayeysiinta inta badan lagu arko joogsiga basaska ee magaalada. Boodhadh waaweyn oo beddelay kuwa magacyada waaweyn oo ay naqshadeeyeen 82 farshaxanno ka kala socda 19 waddan si ay uga soo baxaan fariimaha xayeysiinta ee inta badan laga helo dhammaan waddooyinka Paris.
Waxaa soo qabanqaabiyay mashruuca Brandalism, qaabeynta ayaa leh hadafka shirkadaha adag kuwaas oo iyagu qaata wada hadaladan cimilada muhiimka u ah naftooda, iyagoo iftiiminaya xiriirka ka dhexeeya astaanta ama xayeysiinta shirkadaha iyo macaamilka xad dhaafka ah, isbedelka cimilada iyo cunista shidaalka.
Boorarka ayaa sameeya tixraac badan oo kafaala qaadayaasha shirkadaha ah sida Air France, Dow Chemicals ama GFD Suez (Engie). Qaar ka mid ah sawirrada la soo marsiiyay Photoshop waxay adeegsadaan isla sumeyn iyo farriin ganacsi asal ah, taasoo ku qasbeysa dhagaystayaasha inay si dhow u eegaan waxa ku jira boqollaalka boorar ee maalmahaan laga helay waddooyinka Paris.
«Adoo kafaala qaadaya wadahadalada ku saabsan cimilada, wasakhda ugu weyn sida Air France iyo GDF-Suez-Engie waxay naftooda kor u qaadi karaan iyagoo qayb ka ah xalka markay runtii qayb ka yihiin dhibaatadaAyuu yidhi Joe Elan oo ka tirsan Brandalism.
Escif, Jimmy Cauty, Neta HarariIskaashatada Bansky Paul Insect iyo Kennard Phillips ayaa ka mid ahaa daraasiin fanaaniin ah oo sameeyay boodhadh maalmahan Brandalism. Waxaad ka arki kartaa in ka badan 600 oo boodhadh loo abuuray COP21 at Warka farshaxanka Street iyo bogga Brandalism ee u gaarka ah xidhiidhkan.
El farshaxanka had iyo jeer sida nooc ka mid ah kacdoon oo waxaan ku qaylinayaa inaan soo jiito dareenka sida ay yihiin shaqooyinka kale ee aadka u xiisaha badan ee Bansky laftiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Brandalism: 82 fanaaniin ah ayaa 600 oo boorar xayeysiis 'been abuur ah' u qaadaya waddooyinka Paris si ay uga mudaaharaadaan COP21
Waxyaabaha ugu caansan ee lagu dhejiyo boorarka filimka
Adobe wuxuu magaca u bixin doonaa qalabkiisa animation Flash